Health | သင်ကာဘုန်းမြင့်-Thinker Bhone Myint
February 5, 2020 · 3:48 pm
ခိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (ဖေဖော်ဝါရီ ၅)
သေဆုံးသူ – ၄၉၃ ဦး
တရုတ်နိုင်ငံ/တရုတ်ပြည်မကြီး ပြင်ပမှာ သေဆုံးသူ – ဖိလစ်ပိုင် ၁၊ ဟောင်ကောင် ၁
ပြန်လည်သက်သာ – ၉၂၁
ကူးစက်ခံရသူ – ၂၄၅၆၃
BEIJING, CHINA – JANUARY 30: Chinese children wear plastic bottles as makeshift homemade protection and protective masks while waiting to check in toaflight at Beijing Capital Airport on January 30, 2020 in Beijing, China. The number of cases ofadeadly new coronavirus rose to over 7000 in mainland China Thursday as the country continued to lock down the city of Wuhan in an effort to contain the spread of the pneumonia-like disease which medicals experts have confirmed can be passed from human to human. In an unprecedented move, Chinese authorities put travel restrictions on the city which is the epicentre of the virus and neighbouring municipalities affecting tens of millions of people. The number of those who have died from the virus in China climbed to over 170 on Thursday, mostly in Hubei province, and cases have been reported in other countries including the United States, Canada, Australia, Japan, South Korea, and France. The World Health Organization has warned all governments to be on alert, and its emergency committee is to meet later on Thursday to decide whether to declareaglobal health emergency. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)
January 31, 2020 · 3:44 pm
ဒီမနက် ရောက်လာတဲ့ China Southern လေကြောင်းလိုင်းမှာ ပါလာတဲ့ ခိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သံသယရှိသူ တရုတ်ခရီးသည်ကို ဝေဘာဂီ ဆေးရုံပို့ထားပြီး စောင့်ကြည့်နေတယ်။ လေယာဉ်နဲ့ ပါလာတဲ့ မြန်မာနှစ်ဦးက လက္ခဏာမပြပေမယ့် သီးခြားခွဲပြီး Quarantine လုပ်ထားတယ်။ ကျန် ခရီးသည်နဲ့ လေယာဉ် အမှုထမ်းတွေ လေယာဉ်နဲ့ ပြန်ထွက်သွားပြီ။
(ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်ချက်)
*မှတ်ချက် – ဝန်ကြီးဌာနက ဓာတ်ပုံကို ချက်ချင်း ပြန်ဖြုတ်သွားတယ်၊ ဘာလို့လဲ မသိ၊ ဒီမှာတော့ မှတ်တမ်းယူပြီး တင်ပေးလိုက်တယ်။
(ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် ဖတ်မိသမျှ နောက်ဆုံးရတာလေးတွေ တင်ပါတယ်)
-ဝူဟန်ကနေ ပြန်လာတဲ့ ခရီးသွားတစ်ဦးဆီမှာ ခိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပထမဆုံး တွေ့ရှိတယ်လို့ ဖင်လန်အစိုးရ အတည်ပြု။ (ည ၁၀ နာရီခွဲခန့်က)
-တရုတ်ကနေ လေယာဉ်နဲ့ ကယ်ထုတ်လာတဲ့ ဂျာမနီနိုင်ငံသားတွေကို သီးခြားခွဲထားဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ ဂျာမန် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနပြော။
-ဝူဟန်ကနေ ပြန်ခေါ်လာတဲ့ ဗြိတိန်နိ်ုင်ငံသားတွေကို ၁၄ ရက်ကြာ သီးသန့် ခွဲထားမယ် (quarantine)။ လေယာဉ်ပေါ် မတက်ခင် အဲဒီလို ခွဲထားမှာကို သဘောတူကြောင်း လက်မှတ်ထိုးရမယ်။ မထိုးလိုက ဝူဟန်မှာ ဆက်နေခဲ့။
-ကာဇက်စတန်က တရုတ်နဲ့ အဝင်/အထွက် ဘတ်စ်ကားပြေးဆွဲမှု ပိတ်ပင်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ မှာ ရထား၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၃ မှာ လေကြောင်း ပြေးဆွဲမှု အားလုံး ရပ်ဆိုင်းမယ်။
-တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ တိုက်ရိုက် လေကြောင်း အသွား၊ အပြန်တွေ အကုန်လုံးကို British Airways ဆိုင်းငံ့။
-တိဘက်ဒေသမှာ ပထမဆုံး ခိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု တွေ့။
-ဝူဟန်ကေ ရောက်လာတဲ့ မိသားစုထဲမှာ ခိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု ပထမဆုံး တွေရှိ့ကြောင်း UAE ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန အတည်ပြု။
(ဝူဟနျဗိုငျးရပျဈ ဖတျမိသမြှ နောကျဆုံးရတာလေးတှေ တငျပါတယျ)
-ဝူဟနျကနေ ပွနျလာတဲ့ ခရီးသှားတဈဦးဆီမှာ ခိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ပထမဆုံး တှရှေိ့တယျလို့ ဖငျလနျအစိုးရ အတညျပွု။ (ည ၁၀ နာရီခှဲခနျ့က)
-တရုတျကနေ လယောဉျနဲ့ ကယျထုတျလာတဲ့ ဂြာမနီနိုငျငံသားတှကေို သီးခွားခှဲထားဖို့ စီစဉျနတေယျလို့ ဂြာမနျ ကနျြးမာရေး ဝနျကွီးဌာနပွော။
-ဝူဟနျကနေ ပွနျချေါလာတဲ့ ဗွိတိနျနျိုငျငံသားတှကေို ၁၄ ရကျကွာ သီးသနျ့ ခှဲထားမယျ (quarantine)။ လယောဉျပျေါ မတကျခငျ အဲဒီလို ခှဲထားမှာကို သဘောတူကွောငျး လကျမှတျထိုးရမယျ။ မထိုးလိုက ဝူဟနျမှာ ဆကျနခေဲ့။
-ကာဇကျစတနျက တရုတျနဲ့ အဝငျ/အထှကျ ဘတျဈကားပွေးဆှဲမှု ပိတျပငျ။ ဖဖေျောဝါရီ ၁ မှာ ရထား၊ ဖဖေျောဝါရီ ၃ မှာ လကွေောငျး ပွေးဆှဲမှု အားလုံး ရပျဆိုငျးမယျ။
-တရုတျနိုငျငံနဲ့ တိုကျရိုကျ လကွေောငျး အသှား၊ အပွနျတှေ အကုနျလုံးကို British Airways ဆိုငျးငံ့။
-တိဘကျဒသေမှာ ပထမဆုံး ခိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျမှု တှေ့။
-ဝူဟနျကေ ရောကျလာတဲ့ မိသားစုထဲမှာ ခိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျမှု ပထမဆုံး တှရှေိ့ကွောငျး UAE ကနျြးမာရေး ဝနျကွီးဌာန အတညျပွု။